Valiny haingana sy famerenana amin'ny laoniny ny vatohara - Virtual, 2020 | Fiaretana haran-dranomasina
Valiny haingana sy famerenana amin'ny laoniny ny vatohara - Virtual, 2020
Fanamboarana ny haran-dranomasina any Mexico. Sary © Arcelia Romero
Nanomboka tamin'ny 13-14 aogositra 2020, mpandray anjara 22 avy any Belize no nahazo fiofanana an-tserasera mba hampivelarana ny fahaizana teorika ilaina mba ho lasa mpamaly voalohany ny haran-dranomasina taorian'ny rivodoza ka nahatonga ny fahasimban'ny vatohara. Ity fiofanana ity dia nanaraka ny torolàlana voalaza ao amin'ny Fampitandremana mialoha sy ny fihetsiketsehana haingana momba ny valin-kafatra: Hetsika hanalefahana ny fiantraikan'ny rivodoza mahatsiravina amin'ny vatohara. (Zepeda Centeno et al. 2020) ary misy modely telo sy adiny 2 mandritra ireto lesona manaraka ireto:
- Module 1: Hevi-dehibe momba ny biolojia, ny haiaina ary ny serivisy momba ny tontolo iainana nomen'ny haran-dranomasina; Dingana fampitandremana mialoha; Fomba fanombanana haingana ny fahasimbana
- Module 2: Fampahalalana ankapobeny momba ny valinteny voalohany; Fanadiovana ny haran-dranomasina; Fanampiana voalohany amin'ny vatohara; Fanadihadiana loza ho an'ireo substrata tsy miorina
- Module 3: Fampahalalana ankapobeny momba ny valinteny faharoa; Ny fiheverana ny vaky firafitry ny zanatanin'ny haran-dranomasina; Fanamafisana ireo sombina amin'ny garderie coral, fikolokoloana sy fanaraha-maso.
Ity fampiofanana ity dia notohanan'ny MARFund sy The Nature Conservancy niaraka tamin'ny Departemantan'ny Jono Belize. Ny lesona dia notarihin'i Calina Zepeda avy amin'ny The Nature Conservancy sy Juan Carlos Huitrón. Ny Reef Resilience Network dia nampiantrano ny fiofanana.